Lalao manangona entana an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Lalao manangona entana an-tserasera
ny fampiasana ny aterineto lalao fanangonana entana mivandravandra – ianao no lasa hihaino, contemplative, miforona ny fotoana fanehoan-kevitra fiampangana satria voafetra ihany. Ianao no lasa efa ho mpitsongo, dia manohy ny hilalao, fa ny zava-misy fa ny vokatra rehetra dia nanolotra maimaim-poana, mahatonga ny dingan'ny zava-dehibe indrindra. Ve ianao te-hahafinaritra ny selam-pitatitra, misafidy ny kilalao amin'ny mpitsongo na fitongilanana mifono zava-miafina, izay miteraka ny karazana rivo-piainana ny feo, zavona, anelanelan'ny takariva roa. Ary tsy mba manaitaitra ny saina alohan'ny hatoriana, mety teti-dratsin'ny, izay mifototra amin'ny famoronana, mahandro sakafo, dia lavitra.
Apothecarium ny Renaissance ny Ratsy
Bob The jiolahy I5
Miraviravy lalao am-pianarana
Hetra ny paoma
Paompy paompy Dash Online
Fihinana trondro Mitombo be!
Mila maty ny Slenderman: Silent Streets
Monkey Go Sambatra 343,
Monkey Go Sambatra sambatra 347
Ny tantarako Supermarket
botry kely Run
Monkey Go Stage 345
Monkey Go Stage 377
Evermoor ny Thread ny Fate
Nandao ny fandosiran'ny tanàna
Ny miafina Paska Objekta
Lalao Collection entana tamin'ny Category:
Monkey mandeha sambatra
Farany Lalao manangona entana an-tserasera
Enigma ao amin'ny fianakaviana
Fambolena Zombie Dada Rabbit
Mpiditra an-tsehatra Fantasyland
Fanafihana amin'ny Titans
Olana amin'ny lasa
Dian-tongotra tsy fantatra
Làlan'ny mpanondrana olona an-tsokosoko
Lalao Online Rehetra Lalao manangona entana an-tserasera
ny lalao manangona zavatra – hanabeazana fandinihana
Ny fahaizana hifantoka, mba hahitana tsipiriany madinika, zotom-po sy hikarakara – toetra manan-danja ilaina ho an'ny olona rehetra. Hatramin'ny mbola kely, kiddies kilalao sy ny tolotr'asa ao amin'ny gazety mikendry dia ny fampandrosoana ny fahaiza-manao izany. Fa ny lalao manangona entana an-tserasera mpilalao toa ho tianay kokoa, satria maro be ny tantara mahatsikaiky sy niainany fa afaka hijery ny tsy manam-petra. Eto dia afaka mahita ireto safidy:
Search ho an'ny faritra eo amin'ny sary
Ny Output ny trano
Fishing lavo zavatra
Ny fanangonana ny zavatra ao platformer
hahazo avy amin'ny fandrika
mba ho any amin'ny toerana voafetra hafahafa – Mety tsy ho ratsy. Fa ny toe-javatra toa tsy fanantenana, raha manana maso sy impeccable tena lojika. Around misy tokoa ny zavatra izay afaka manampy. Misy varavarana misokatra sy safes, mahatonga an'ilay fanirian hafa, ary ny hafa dia ny tsipiriany ny fanorenana.
Mety ho mafy na dia zavatra sy ny faritra, mba hahitana mba ho iray, mba hampifandray. Aza kivy ary miezaka mampiasa hita ao amin'ny paritra. Raha toa ianao ka nomena izany zavatra izany, noho izany dia any amin'ny toerana afaka hanararaotra.
momba ny Lalao tafiditra mandosira ny famoriam-bola ny zavatra, ary afaka ho ao amin'ny trano-pianakaviana tsara tarehy kely, ao amin'ny efitra manokana, teo amin'ny sambo ny vahiny tany amin'ny crypt, ny efitrano fianarana, sy ny toerana maro hafa.
Ireo tena tsara, mahafinaritra fikatsahana fahafaham-po!
Misy fikatsahana fahafaham-po, raha ny marina, Azo lazaina lohahevitra mba hiala tamin'ny efi-trano, fa ny tena foto-kevitra dia midika fahafahana bebe kokoa. Ny tena asa dia ny hanangona zavatra, fa ankehitriny ny tantara manolotra asa isan-karazany.
Nisy andianà sambatra lalao momba ny gidro, dia foana ny foto-kevitra vaovao. Amin'ny vorompano sombintsombiny dia ho vonona ny Krismasy, ny hanomboka sambon-danitra sy ny afomanga, mba hitady sy hamonjy ny namana hirenireny ao amin'ny trano-maizina lapa mangatsiaka mpampianatra ratsy, hahita ny lalana an-trano, lavitra ny honahona sy ny toeram-pitrandrahana mampidi-doza. Kilalao tsirairay dia hanatanteraka ny iraka lehibe indrindra, fa ho an'ny mahomby vita ny dingana maro ilaina ny mitady zavatra sy hampiasa azy ireo. Raha tianao, dia afaka manorina ny ny sambon-danitra, fa tokony ny zavatra sy ny fitaovana. Eny, manangona ny lalao an-tserasera noho izany zavatra ary natao. Mahazo miasa, ary handresy ny vahindanitra.
ary mandeha mamonjy tsy tapaka Diego biby. Ary ankehitriny dia manana jaguar naratra. Voalohany, dia ilaina ny mahita ny mahasoa maitso, ary avy eo dia hametahana azy ireo ny ratra. Ny rahalahiko Dora koa teny an-dalana – dia manangona kintana, mitsambikina amin'ny ambaratonga. Indray mandeha koa, ny zazavavy tsy very hevitra amin'ny piraty sambo, mitady vola madinika volamena, niparitaka teo amin'ny tokotanin-tsambo, ary niraikitra tao amin'ny zana-kazo. Mitadiava vahaolana ho azy sy nandritra ny fitana ny ony mba hahita ny fahatapahan'ny ny tetezana. Ny zava-dehibe indrindra dia ny mahita ny fitaovana izay mba hanorina iray vaovao.
Inscrutable no alehan'ny labyrinths sy ny havoana platformer
mirenireny noho ny be pitsiny Misafotofoto sy lalantsara, dia ilaina tsy hoe mba hahita ny lalana ka afa-mandositra ny biby sy manangona Bonus zavatra. Isaky ny mandray artifact voafantina hevitra, fa mahazo ny lalao faly. Toy ny Misafotofoto dia afaka ny ho fivarotana lehibe, sy ny talantalana, ny lapa ny trano-maizina, sewers, fanaovana kermesy.
Heroes sy handresy ny tampon-rahona, cubes mitsingevana nosikely, vato, elevators, ary ny sehatra hafa. Ny tsirairay dia kintana iray hafa, mamy, fo. Nandritra ny manaraka manomboka fiakarana taranaka vaovao, Ary tsara ny mahazo ny vaovao toerana, ary indraindray dia tsy maintsy mampiasa ny fanoitra, misintona ny tady na ny asa fanaovan-gazety.